ခေတ်​သစ်​သဲထိတ်​ဖိုဇာတ်​ကား​တွေရဲ့ပြဿနာ — Steemit
zarchi (41)in #esteem •3years ago
ကျွန်မထိတ်လန့်စာပေနှင့်ရုပ်ရှင်ချစ်ကြတယ်။ ကြောင်းနေသော်လည်းဝေဖန်သူအများအပြားကကျွန်မအလွန်အမင်းကောင်းစွာသဘောပေါက်ထိတ်လန့်ပုံပြင်များကိုခံစား, တကအသေးစားအမျိုးအစားဖြစ်ယုံကြည်ပါတယ်။ ရိုးရိုးသားသားဖြစ်စေရန်, ငါ "အဓိပ္ပါယ်ရှိသော" စာပေ၏ခေတ်ပြိုင်လမ်းကြောင်းသစ်မကြိုက်ပါ, ဒါပေါ်အဆုံးမဲ့ရှုပ်ထွေးပြဿနာများပြုစုပျိုးထောင်ပုံပြင်များ, ဖခင် ​သားဆက်ဆံရေးကို, စိတ်ထဲတွင်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနက်ဆုံးသောတွင်း၏။ ငါအသစ်ကဘာမျှမကဤအကြောင်းကိုစာဖြင့်ရေးသားနိုင်ပါတယ်ယုံကြည်
ဖြစ်နိုင်သည်ကဤအကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်ပြီးကဆိုပါတယ်နိုင်ဘာသာရပ်များ-အရာအားလုံးပြီးသားစာရေးဆရာများ၏ယခင်အစဉ်အဆက်အားဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအတိမ်အနက်ကိုလိုလျှင်, ငါ -ခေတ်သစ်စာရေးဆရာများအဘယ်သူအားမျှပိုကောင်းရေးနိုငျကွောငျးအာမခံ ဒါမှမဟုတ် ဖတ်ပါ။
အကြှနျုပျယုံကွညျအဖြစ်အခြားတစ်ဖက်တွင်ငါသည်လည်းကြောက်မက်ဖွယ်ကံမကောင်းသိပ္ပံဝတ္ထု, အတူဤအမြိုးအစားသို့ကျရောက်, "ပေါက်ပေါက်ရုပ်ရှင်" ၏လမ်းကြောင်းသစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသံသယခံစားရသည်။ အရာ-မှတပါး ချင်းမိုင်နှင့်အချို့သောအခြားသူများ၏စကားပြောသောငါသည်ကြာမြင့်စွာအဘို့မဆိုကောင်းသောသိပ္ပံ-စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းများကိုမြင်ကြပြီမဟုတ်; ယနေ့ခေတ်, သိပ္ပံ-စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းများကိုအာကာသအတွင်းလေဆာရောင်ခြည်တန်း, မရေမတွက်နိုင်တဲ့ဆယ်ကျော်သက် ( "ငါ့အမေငါ့ကို9နာရီအထိ-အာဏာရှင်စနစ်လိုက်သွားကြကုန်အံ့မည်မဟုတ်!") အကြောင်းကိုဖြစ်ကြောင်း, ဒါမှမဟုတ်ဂြိုလ်သား-နှင့်ဤပုံပြင်များအဘယ်သူအားမျှအကြောင်းကိုညံ့ဖျင်း-တိကျမ်းစာ၌လာသည်စာအုပ်များဖြစ်ကြသည် ရဲ့ "ဖောင်ဒေးရှင်းက" သို့မဟုတ်ဟားဘတ်ရဲ့ရန်ကိုပင်အနီးကပ် "သဲခုံ။ "
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေအဘယ်သို့ငါတကယ်ဆွေးနွေးခြင်းငါဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်စာအုပ်တွေထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုထိတ်လန့်ပုံပြင်များ, တောင်းဆို, ဒါပေမယ့်ညံ့ဖျင်းအရေအတွက်-သို့မဟုတ်ကွပ်မျက်ခံရအတွက်အနည်းငယ်နေကြသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအဖုတ်ကောင်ရုပ်ရှင်အပေါငျးတို့သနှင့် သို့မဟုတ်အမှတ်စဉ်လူသတ်သမားအကြောင်းကိုရုပ်ရှင်, ဒါကြောင့်မြောက်မြားစွာပါပြီ: ကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာသေးမီဆယ်စုနှစ်များဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးမှာကြည့်ယူလျှင်, ငါတို့သည်အလွယ်တကူကြောက်မက်ဖွယ်ဖြစ်ဟုဆိုသည်နိုင်ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကျယ်ပြန့်အရေအတွက်အားမြင်ရပါလိမ့်မည် ဖျော်ဖြေရေးဒီလိုမျိုးများအတွက်ဝယ်လိုအားငြင်းပယ်ရန်ခက်ခဲသည်။ သို့သော်မည်မျှသောဤထုတ်ကုန်များ၏အမှန်တကယ်ကြောက်စရာရှိပါသလဲ ကံမကောင်းစွာပဲကျွန်မ-ငါနောက်မှသို့ လိမ့်မယ်အထင်ကြီ့းတဦးတည်းရုပ်ရှင်မှတ်မိနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ခေတ်ပြိုင်ထိတ်လန့်ပုံပြင်များသှေးထှကျသံယိုနှင့်ရွံရှာခြင်းထက်ကွောကျမကျနဲ့ငါ့ထံသို့အလေးအနက်, တကထိတ်လန့်ရုပ်ရှင်အဓိကအားကျလာသောသင့်ကြောင်းကိုကွောကျရှံ့ဖြစ်ပါတယ်။
ငါက "အမေရိကန်ထိတ်လန့ပုံပြင်" ရှိုးကိုကြည့်ဖို့ကြိုးစားနေသတိရပါ။ ရှေ့တော်၌စောင့်ကြည့်ဖူးသောငါ၏မိတ်ဆွေတချို့ကကြောင့်ထိတ်လန့်အမျိုးအစား၏ပြန်လည်ရှင်သန်မှုထက်မနည်းဖြစ်ပြောဆိုထားသည်။ ငါ့ထံသို့ကြောင့်တခါတရံတခုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြံစည်မှု, ဒါပေမယ့်ထက်ပိုပြီးဘာမျှမနှင့်အတူတစ်ဦးမဟုတ်ဘဲပြပွဲဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါကဂြိုလ်သား, နတ်ဆိုး, နာဇီသိပ္ပံပညာရှင်များ, နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအရူးရှုပ်ထွေးခဲ့ -ပေမယ့်ငါကတစ်ဦးပြန်လည်ရှင်သန်မှုကြောင်းမပြောနိုင်ပါဘူးသာကြောင့်, ငါ့အကြိုက်ဆုံးတစ်စိတ်ရောဂါခိုလှုံခွင့်နှင့် ပတ်သက်. တဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူအများအပြားရာသီစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြသည်။ ကျနော့်အမြင်တွင်, ကအစားတစ်လိမ္မာပါးနပ်ခေါင်းပုံဖြတ်, တစ်ဦးပါရမီ ဒါပေမယ့်မရငါမှပြန်လာလိမ့်မယ်တဲ့ထိတ်လန့်ပုံပြင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
#horror #movies #problem
3 years ago in #esteem by zarchi (41)